Goodluck Jonathan akpọola ndị ala Naịjiria oku ka ha na-ekpesi ekpere ike
Onye isi ọchịchị nke ala Naịjiria bụ Goodluck Jonathan akpọkuona ndị Naịjiria niile ka ha ghara ịda mba n’ịkpere ala Naịjiria na ndị na-achị ya ekpere. Ọ kpọrọ oku ka a na-ekpesiri Naịjiria ekpere ike tụmadị n’oge a ndị Boko Haram na-ebusa ala Naịjiria agha iyi egwu.
Jonathan kpọrọ oku a taa bụ ụbọchị ụka, mgbe ọ na-aka ụka n’ụlọ okpukpere chi Cathedral Church of Christ, na Marina, na Lagos.
Jonathan kwuru na ndị Naịjiria kwesiri ịna-ekpesi ekpere ike tụmadị ugbu a ala Naịjiria na-enwe ihe iche aka mgba gbara ọnọdụ nchekwa. Tụmadị ugbu a ala Naịjiria na-akwado ịme ntụli aka maka ịhọpụta ndị isi ọchịchị.